Eedeynta Don oo weli meesheedii kasii socoto xilli Wargeyska reer Germeny ee Bild uu maanta dharka ka dhigay Ronaldo | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Eedeynta Don oo weli meesheedii kasii socoto xilli Wargeyska reer Germeny ee Bild uu maanta dharka ka dhigay Ronaldo
Eedeynta Don oo weli meesheedii kasii socoto xilli Wargeyska reer Germeny ee Bild uu maanta dharka ka dhigay Ronaldo
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 17-06-16 1:49 PM Wargeyska maalinlaha ah ee ka soo baxda Jarmalka ee Bild ayaa maanta weerar xun ku qaaday Hogaamiyaha xulka Portugal Cristaino Ronlado. Jariirada Blind ayaa inta badan bogeeda u hibaysay maqaal ay ka diyaarisay dhaqankii Don Ronaldo ee kulankii Porutal iyo Iceland ee kulankii Euro2016.
Ronaldo ayaa saxaafada si xun uga weerar xun kaga qaaday Iceland isaga oo ku eedeeyay xulka qaranka Iceland ku tilmaamay kuwo maskax ahaan u liita isla markaana aanu filayn in ay wax ka samayn karaan tartanka qaramada Yurub, wuxuuna hadalkan sheegay kadib kulankii ay Iceland barbaraha 1:1 ka ahaa la gashay Portugal. Laakiin jariirada Bild ayaa shaaca ka qaaday arin kale oo dhex martay Cristiano Ronaldo iyo xidiga xulka qaranka Iceland ee Aron Gunnarsson kaas oo markii uu kulankani dhamaaday Ronaldo waydiiyay in ay garamaanta kala badalan karaan.
Sida ay Bild sheegtay xidiga ree Iceland ee Aron Gunnarsson ayaa Ronaldo garabka soo qabtay wuxuuna waydiiyay in ay garamaanta kala badashaan laakiin kadib markii uu saddex jeer Aron Gunnarsson uu ku celiyay hadalka ayuu Ronaldo xidigan waydiiyay: “garamaanta aan kala badalano? adiga ayaad tahay?”.
ariirada Bild ayaan wax naxariis ah u muujin xidiga saddexda jeer ku guulasytay abaal marinta Ballon d’Or-ka, waxayna qormadeeda ku sheegtay in Cristiano Ronaldo uu yahay qofka aduunka iskula wayn ee iskibriya. Jariiradaha ree Spain ee AS iyo Sport ayaa dhinaceedo wax ka qoray warka ay Bild eedaynta wayn ugu soo jeedisay Ronaldo. Cristaino ayay hore ugu jawaabeen xidigo ree Iceland ahi waxayna ku tilmaameen guuldarayste xun.